Cawad:"Farmaajo-Uhuru Heshiiskoodu waa in khilaafkii jirey layska ilaabo"
MUQDISHO, Soomaaliya – Wasiirka Arrimaha Dibadda xukuumadda federaalka ah ee Soomaaliya, Axmed Ciise Cawad, ayaa wuxuu sharaxaad dheeri ah ka bixiyey is-afgaradkii dhexmaray Farmaajo iyo dhigiisa Uhuru Kenyatta.
Labada madaxweyne ayaa galabnimadii Khamiista ku kulmay magaaladda Nairobi oo ay uga wada qeybgaleen shirweyne ay qabanqaabisay Qaramadda Midoobay.
Cawad oo wareysi gaar ah siiyey VOA-da gaar ahaan laanta Af Soomaaliga ayaa tilmaamay in is-afgaradka aysan qayb ka ahayn kiiska badda oo ku adkeystay in Maxkamadda ICJ ay xukmin doonto.
Mar wax laga waydiiyey hadal kasoo yeeray dhigiisa Kenya oo ahaa in Farmaajo “aqbalay” in gal-dacwadeedka lagu dhameeyo qaab labada dal wada ogol yihiin ayuu gabi ahaanba meesha ka saarey.
“Gabadha wasiir waaye anna wasiir baan ahay, waxaan kuu sheegayaa wixii lagu wada hadlay. Waxaan kaloo kuu sheegay madaxweyneyaasha oo wasiirada ka mahiimsan waxay sheegen,” ayuu yiri.
Xukumadda Soomaaliya in aan iska hor-imaano Hadafkeenu Ma Ahaa: Imaaraadka
Tobanaan lagu dilay weerar ay Al-Shabaab ka fulisay Kenya
Labada hogaamiye ayaa saxaafadda u sheegay in ay isla qaateen soo celinta cilaaqaadka, qaaditaanka xayiraada socdaalka tooska ee Muqdisho-Nairobi iyo in kiiska badda uusameyn xiriirka labada dal.
Doorashadii Jubbaland ee dhowaan ka qabsoontay Kismaayo uuna kusoo baxay madaxweyne Axmed Madoobe balse ay xukuumadda diidey ayaa kamid ah arrimaha keenay khilaafka.
Wasiir Cawad oo wax laga su’aallay arrintaan ayaa ka gaabsaday in uu si gaar ah u dul istaago, balse wuxuu ku adkeystay “madaxweyneyaasha waxay ku heshiiyeen in layska ilaabo khilaafkii horey u jiray”.
“Waxaan kuu sheegay in wixii khilaafyo jiray in laga gudbo oo xaalada lagu soo celiyo xiriirka caadiga,” ayuu tibaaxay. “Macnaheedu waxay weye in wixii khilaafoo jiray oo labada dal dhexmaray in layska ilaabo”.
Wasiir Cawad ayaa hadalkiisa wuxuu kusoo xiray: “Xiriirka caadi lagu soo celiyo…arrinta maxkamaddana aysan si dhib ah aysan u saameyn xiriirkeena”.
Maxkamadda Cadaaladda Aduunka ee ICJ taas oo hoostagta Qaramada Midoobay ayaa lagu wadaa in dhageysiga gal-dacwadeedka ay bilowday bisha June 2020, iyadda oo kadib soo saari doonto xukunka oo rafcaan la’aan ah.